Global Voices teny Malagasy » Espaina : miteraka resabe ilay didim-pitondrana hamongarana ny taolambalon’ilay filoha jadona, Francisco Franco · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 20 Oktobra 2019 17:12 GMT 1	 · Mpanoratra Lourdes Sada Nandika (fr) i Annick Battesti, avylavitra
Sokajy: Eoropa Andrefana, Espaina, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara
Sary fanaingoana an'ny Revue Contexto , nampiasàna ny lisansa Creative Commons Attribution non commerciale 4.0 International  (CC BY-NC 4.0).
Ny 28 Septambra lasa teo ny Fitsarana Antampony Espaniola no nandany tsy nisy nitsipaka io didim-pitondràna io,, nankatoavina tamin'ny Mai 2017  tao amin'ny Parlemanta, hanomezana alàlana ny famongarana ny taolambalon'ilay mpanao jadona, Francisco Franco, ao amin'ny bazilikan'i Valle de los Caídos (Lohasahan'ireo lavo) [fr] . Tolokevitry ny governemanta ny hamindràna azy ho ao amin'ny tanimpasana ao Pardo, izay toerana ananan'ny fianakaviany lasapely iray misy lavabato nandevenana an'i Carmen Polo, vadin'ity mpanao jadona ity.
Ao amin'ny lohasahan'i Cuelgamuros , akaikin'i Madrid no misy ilay bazilika goavana, izay mitatao misy tanambokovoko manana haavo 150 metatra. Taorian'ny ady an-trano tao Espaina no nanorenana azy, ary naharitra 18 taona ny asa. Ao amin'ireo lavabato nolavahana ao aminy no milevina ireo 33.872 mpikatroka avy amin'ny andaniny sy ny ankilany, mahatonga ity basilika ity ho ny fasana itambarambe lehibe indrindra ao amin'ny firenena.
Famindràna ny taolambalon'ireo mpikatroka maty nandritry ny ady an-trano. Pikantsary avy amin'ny lahantsary  an'ny EiTB  tao amin'ny YouTube.
20 000 ireo politisiana nifofotra ho amin'ny fananganana azy — an-tsitrapo ny an'ny sasany mba hanamaivanany ny alahelony — tao anaty fepetra tsy manaja ny maha-olona, niaritra fitsipika toy ny any amin'ny toby fanibohana faobe . Ireo taolana mipetraka any anatin'ireo colombariums misy ao aminy dia mazàna no nafindra tsy nieràna tamin'ny fianakaviana, izay an-taona marobe vao mahatsikaritra hoe tsy ao amin'ny toerana noheveriny ho nisy azy hatrizay intsony ny havany.
Vondrom-piarahamonina moanina “bénédictins”  no mikarakara ilay bazilika, moanina izay mipetraka ao amin'ny monasitera ao anatin'ilay faritra ihany.
Ny 20 Novambra 1975 no maty i Franco. Na tsy naneho velively ny faniriany hilevina any Cuelgamuros aza ilay mpitondra mpanao jadona, ireo manampahefana no nanapaka hevitra handevina azy any , herinandro roa monja taorian'ny nahafatesany, nanery ireo famaranana ilay asa fanorenana ho tsy maintsy vita tao anatin'ny fotoana faran'izay fohy.
Saingy Franco tsy naniry ny hilevina ao Valle de los Caídos  — io tsangambato io rahateo noforonina ho toeram-pitsaharana ho an'ireo olona lavo nandritra ny ady an-trano —, fa ao amin'ny tanimpasana ao Pardo. Tamin'i Francisco Franco Salgado-Araújo , mpirahalahy tsy omby kibo taminy (cousin) no nilazany izany hetahetany izany, izay nitatitra izany tao anatin'ny boky nosoratany: “Franco au jour le jour” (ny isanandron'i Franco).
Nandà hatrany an'ilay famongàrana azy ireo zafikeliny, tamin'ny filazàna fa malalaka ny fianakaviana handevina ny havany any amin'izay toerana tiany hanaovana izany, ary nandrahona mihitsy ny hamindra ny raiben-dry zareo ho any amin'ny fasam-pianakaviana ao amin'ny cathédrale de la Almudena , ao afovoan'i Madrid, toerana ilevenan'ny zanany vavy sy ny vinantolahiny. Nantsoin'ny governemanta espaniola ny fiangonana katolika, izay, na tsy mankasitraka ilay hevitra aza, dia nanambara ho angady tsy mahatapaka ahitra handrara io famongàrana io, an'olontsotra tsinona ilay toerana .
Fahasarotana fanampiny, ilay mpanonona ranom-bavaka ao amin'ny vondrom-piarahamonina “bénédictine” , izay fantatra loatra fa manana fironana mpifikitra fatratra amin'ny nentin-drazana, dia nanohitra ny fitsabatsabahana rehetra tahaka izany. Ny mpitsara, José Yusty, aza dia nanandrana ny hampiato ilay dingana  tamin'ny filazana ny mety hisian'ny rahomitatao, lazaina fa “noho ny fangatahan'ny olona iray”.
Valle de Cuelgamuros, miaraka amin'ilay bazilika sy ilay tanambokovoko goavana be ao amin'ny Valle de los Caídos. Sary: Wikimedia Commons , nampiasàna ny lisansa Creative Commons Partage sous les mêmes conditions 3.0 non transposée  (CC BY-SA 3.0).
Nofafàn'ny Fitsarana Antampony, izay nanaovan'ireo mpandova azy antso, daholo ireny sakana ireny, tsy nihambahamba. Tao anatin'ny didy navoakany , nolavin'ny fitsaràna ny zon'ny fianakaviana handevina ilay mpitondra jadona ao anatin'ny katedraly ao Madrid, tamin'ny fanindriana ny mety hivadihan'ilay fasana ho lasa “mariky ny fitroaran'ny tafika, ny ady an-trano sy ny famoretana nataon'ny fitondràna jadona”. Etsy ankilany, nohamafisiny ny fanapahankevitry ny governemanta handevina an'i Franco ao amin'ny tanimpasana ao Pardo satria “efa tapitra ny fetrandro nomena ireo zafikeliny mba hisafidy toerana iray hafa”. Notsipihany fa ry zareo mpitaraina “tsy nanome izay antony momba ny fandavan-dry zareo ny hitondrana ireo taolambalon'ny raibeny hilevina eo anilan'ireo an'ny renibeny”.
Ireo antoko avy amin'ny ankavanana, ny Parti populaire (PP) sy ny Ciudadanos, dia miray feo manambara fa tsy hanome na tamingana Euro iray aza ho an'io famongarana io, mizotra tsy ankiteniteny ny zavamisy, dia ny hoe isantaona ny fikolokoloana ilay mozole dia andaniana 1,8 tapitrisa euros  avy amin'ny volam-bahoaka. Ireo antoko avy amin'ny ankavia kosa dia miarahaba tena noho ny fivahàn'ity fifandirana ity izay efa naharitra an-taona maro, raha ny avy amin'ny farany havanana indrindra indray naneho ny hasosorany lalina.
Eduardo Moreno, nisora-tena ho mpitondra tenin'ny antoko farany havanana «Movimiento por España» (Hetsika ho an'i Espaina) aza dia tonga hatrany amin'ny fitenenana  hoe «mitovy ny fepotoana ilain'i Franco handaozany ny Valle de los Caídos, sy ny andro sisa hiainan'izay hakà azy hiala tao”. Ny fikambanan'ny avy amin'ny farany havanana ADÑ  dia niantso hetsika goavana ho fanoherana .
Nandritra ny fotoana fanaovana fanamarinana tao amin'ny Antenimieran'i Madrid, ramatoa filohan'ireo andrim-panjakana io, Díaz Ayuso, mpikambana avy amin'ny PP, tonga ao anatin'ny governemanta madrilena noho ny vato avy amin'ny antoko farany havanana Vox [fr] , no namaly  ny fanontanian'i Rocío Monasterio, mpitondra tenin'io antoko io voalaza io :
El Gobierno aprueba el decreto para sacar al dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos https://t.co/2n8sasCPbo  #unboxing  pic.twitter.com/MHejJbywvV 
Nambaran'ny  fianakaviana ny fikasàny hanao fampakarana ilay didy ho eny amin'ny Fitsarana momba ny Lalampanorenana, ary eritreretiny mihitsy aza ny hangataka ny Fitsaràna Eoropeàna miandraikitra ny zon'olombelona mba hiditra amin'izao raharaha izao. Mety mbola hampitarazoka ilay famongarana ireo dingana ireo, famongarana izay kasain'ny governemanta hotontosaina mialoha ny fampielezankevitra ho an'ireo fifidianana solombavambahoaka hatao ny 10 Novambra ho avy io.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/10/20/144100/
 lisansa Creative Commons Attribution non commerciale 4.0 International: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es
 nankatoavina tamin'ny Mai 2017: https://www.eldiario.es/sociedad/Congreso-Franco-Valle-Caidos-PP_0_642535910.html
 Valle de los Caídos (Lohasahan'ireo lavo) [fr]: https://fr.wikipedia.org/wiki/Valle_de_los_Ca%C3%ADdos
 lohasahan'i Cuelgamuros: https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Cuelgamuros
 20 000 ireo politisiana nifofotra : https://www.eldiario.es/sociedad/Valle-Caidos-Fernandez-Diaz-Congreso_0_814368721.html
 niaritra fitsipika toy ny any amin'ny toby fanibohana faobe: https://diario16.com/un-superviviente-del-valle-de-los-caidos-desmonta-las-mentiras-del-prior-cantera/
 Vondrom-piarahamonina moanina “bénédictins”: https://www.elplural.com/politica/59-anos-de-opacidad-benedictina-en-el-valle-de-los-caidos_119798102
 nanapaka hevitra handevina azy any: https://cadenaser.com/ser/2019/09/24/tribunales/1569335295_266606.html
 Franco tsy naniry ny hilevina ao Valle de los Caídos: https://elcierredigital.com/investigacion/560236582/familia-franco-esconde-gobierno-preferencias-dictador.html
 cathédrale de la Almudena: https://www.elplural.com/sociedad/la-jugada-de-los-franco-un-nuevo-mausoleo-en-madrid_203858102
 ilay mpanonona ranom-bavaka ao amin'ny vondrom-piarahamonina “bénédictine”: https://www.eldiario.es/sociedad/Santiago-Cantera-Valle-Franco-Antonio_0_748225950.html
 Ny mpitsara, José Yusty, aza dia nanandrana ny hampiato ilay dingana: https://www.elperiodico.com/es/politica/20190226/juez-suspende-licencia-exhumacion-franco-7325668
 lisansa Creative Commons Partage sous les mêmes conditions 3.0 non transposée: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es
 didy navoakany: http://www.poderjudicial.es/stfls/TRIBUNAL%20SUPREMO/OTROS%20DOCUMENTOS/Nota%20sentencia%20exhumaci%C3%B3n%20Franco.pdf
 andaniana 1,8 tapitrisa euros: https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9348070/08/18/Valle-de-los-Caidos-un-mantenimiento-de-18-millones-al-ano-y-una-reforma-urgente-pendiente-de-13-millones.html
 hetsika goavana ho fanoherana: https://www.publico.es/politica/exhumacion-dictador-ultraderecha-prepara-movilizaciones-frente-sede-psoe-protestar-exhumacion-franco.html
 Vox [fr]: https://fr.wikipedia.org/wiki/Vox_(parti_politique)
 September 24, 2019: https://twitter.com/Hank_Solo/status/1176466661190307841?ref_src=twsrc%5Etfw